Moldova inogamuchira 61st Musangano weUNWTO Commission yeEurope
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » Moldova inogamuchira 61st Musangano weUNWTO Commission yeEurope
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • dzidzo • Musangano Weindasitiri Nhau • Moldova Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Dhinda Zviziviso • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Nyika dzinopfuura makumi matatu nenhengo dzakabatana dzeWorld Tourism Organisation (UNWTO) dzakaungana svondo rapfuura muChisinau, guta guru reRepublic of Moldova, kumusangano weMakumi matanhatu nenomwe weKomisheni yeUNWTO yekuEurope. Vatori vechikamu vakakurukura nzvimbo dzekutanga dzeSangano pamwe nemazano ekumisikidza chikamu chekushanya semutyairi wekusimudzira budiriro muEurope (30 Chikumi 61).
Musangano uyu wakakoshesa zvakanyanya kudiwa kwekuenderera mberi nekuvandudza basa reUNWTO pakusimudzira kufamba kwakachengeteka, kwakachengeteka uye kusina musono. UNWTO nguva pfupi yadarika yakaparura High Level Tourism uye Security Task Force kufambisa nyaya iyi. Nhengo dzeNyika dzakaratidza kushora kwavo kurwiswa kwakaitwa nguva pfupi yapfuura kwevagandanga muEurope, uye miniti yerunyararo yakaitwa mukurangarira avo vakaurayiwa.
Chinhu chechokwadi uye chisina kuongororwa mukushanya kweEuropean, ane waini inokosheswa uye inozivikanwa pasirese, Republic of Moldova yakaratidza kuzvipira kwakasimba neyakaenderera yekushanya. “Republic of Moldova ichiri nzvimbo yekushanya iri kusimukira, asi ine mukana wese wekuva nzvimbo yekuona; kuzvipira kwakaratidzwa mukusimudzirwa kwekusimudzira kwekushanya kuchaona kuti nyika inowana mibairo yose inounzwa nekushanya. ” akadaro Secretary General weUNWTO, Taleb Rifai.
Secretary-General weUNWTO Taleb Rifai akasangana nemutungamiri weRepublic of Moldova, Pavel Filip, kuti vataure nezve basa rezvekushanya mukusimudzira hupfumi hwenyika. Musangano uyu wakasimbisa kukosha kuri kupihwa Moldova nebazi rezvekushanya muhupfumi hwenyika.
"Tine chokwadi chekuti kushanya chinhu chakakosha kuMoldova kuzadzikisa kukura nekusimudzira mabasa, uyezve kutibatsira kuzadzikisa Sustainable Development Goals (SDGs). Musangano uyu pasina mubvunzo uchatibatsira kutsigira chikamu chedu chekushanya mukuzadzikisa kugona kwayo ”akadaro Stanislav Rusu, Director General we Tourism Agency yeRepublic of Moldova.
Musangano weUNWTO weKomisheni wakaongorora zvakare basa remakomisheni emakomisheni emakomisheni eCompetitiveness, Sustainability uye Statistics uye Tourism Satellite Akaunti (TSA), uye zviitiko zveNhengo dzeMatunhu kupemberera Gore reNyika Dzese reSustainable Tourism yeKusimudzira 2017. Zvimwe zvinhu zviri pachirongwa zvaisanganisira kushandurwa kweUNWTO Global Code of Ethics kuita musangano wepasi rese, kuumbwa kwemakomiti emunyika nezvehunhu hwekushanya uye izvo zvakakosha zveiyo UNWTO's Chirongwa Chebasa che2018-2019.
Musangano uyu wakapedzwa neChipiri Chiitiko cheGore reInternational reSustainable Tourism for Development 2017 kuratidza zvirongwa zvakagadzirwa muItari neFrance - Ecobnb neBetterfly Tourism uye mutambo wekudyara miti nekuvapo kweMunyori-Mukuru weUNWTO, Director General weVakashanya Sangano reRepublic of Moldova, Musoro weEU Delegation kuMoldova, Pirkka Tapiola, uye nharaunda yekudyidzana yeMoldova.
Hungary yakasarudzwa kuitisa mhemberero dzepamutemo dzeWorld Tourism Day 2018 uye Nyika dzeNhengo dzakatambira kukwikwidza kweCzech Republic kuti iite musangano we2019 UNWTO Regional Commission. Sarudzo mbiri idzi dzichaendeswa kuUNWTO General Assembly uye kuRegional Commission yeEurope, zvichiteerana, munaGunyana kuChengdu, China.